June 17, 2020 – Xorriya Online
Wasaaradda Caafimaadka oo xaqiijisay in tiro bukaano ah ka bogsadeen xanuunka Covid-19
Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa warbixinta maalinlaha ah ee COVID19 ku sheegtay inay Feyruska Karoona ay ka bogsoodeen 36 qof oo cusub, taasi oo tirada guud ee dadka bogsooday ka dhigeysa ku dhawaad 685. Marwo Fowziya Abiikar Nuur ayaa sidoo kale caddeysay in la diiwaan geliyay 38 […]
Dad Cudurka COVID-19 ugu geeriyooday Somaliland oo la gubay
Warar laga helaayo duleedka Magaalada Hargeysa ee Caasimadda Somaliland ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaas Maanta lagu gubay Meydadka Dad u dhintay Cudurka halista ah ee COVID-19. Dhacdada lagu gubay dadkaas ayaa ka dhacday deegaan lagu Magacaabo Xeedho oo ku yaalla Waqooyiga Magaalada Hargeysa, waxaana la sheegay in dadka Meydadkooda la gubay ay lahaayeen kuwo […]
Guddiga Diyaarinta Xeerarka dhameystirka Doorashooyinka Qaran ayaa maanta Golaha Shacabka u qeybiyay afarta xeer ee Doorashada ee loo saaray inay soo diyaariyaan. Guddoomiyaha Guddigan Ibraahim Isaaq Yarow ayaa ka hor-aqriyay Xildhibaannada Afarta Xeer, isagoo xeer walba is-dultaagay shaqooyinka ay ka soo qabteen wadatashiyadii ay geliyeen. Afartan Xeer oo kala ah Xaqiijinta Qoondada Haweenka, Mataalada Gobolka […]
Dowladda Soomaaliya oo dib u dhigtay furitaanka duulimaadyadii gudaha dalka
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta mar kale si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dib u dhigtay furitaanka duulimaadyadii Soomaaliya. Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Maxamed C/llaahi Salaad (Oomaar) ayaa sheegay in dib loo dhigay furitaanka duulimaayada gudaha, sababo la xiriira ka taxadarida faafitaanka cudurka Covid-19. Wasiirka ayaa sheegin xilli rasmi ah oo dib loo furayo […]
Ciidanka Xoogga dalka oo ay wehliyaan kuwa Nabadsugida ayaa howlgal qorsheysan ku gaaray deegaanka War-xoolo oo hoostagta degmada Ceelbuur ee Gobolka Galgaduud oo ka mid ah deeegaanada Al-Shabaab maamulaan. wararka ayaa sheegaya dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa isaga baxay deegaanka, kaddib markii ay ka war heleen inay Ciidamada ku soo wajahan yihiin, waxaana ay u baxeen dhanka […]
Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa Maanta oo Arbaco ah waxaa lagu wadaa in kulankii 2-aad ee Kal-fadhiga 7-aad ku yeeshaan Xarunta Villa Hargeysa ee Magaalada Muqdisho. Xildhibaanada Golaha Shacabka ayaa xalay waxaa lagu wargeliyay inuu jiro kulan loogana baahan yahay inay kasoo qeyb galaan, si loo dardar-geliyo howlaha Golaha, maadaama muddo xiloodkoodka uu […]
Ciidanka Xoogga dalka iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ay howlgal qorsheysan ka sameeyeen deegaao duleedka ka ah Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan. Ciidamada dowlada iyo AMISOM ayaa howlgalka sigaar ah uga fuliyay deegaanka luuq jeeloow oo la sheegay in muddo badan ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-shabaab, […]